I-India ifuna i-UK ukuba ichithe indawo yokuvalelwa yamaIndiya agonyelweyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziHlumayo zase-UK » I-India ifuna i-UK ukuba ichithe indawo yokuvalelwa yamaIndiya agonyelweyo
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Umgaqo, ogunyazisa iintsuku ezili-10 zokuzimela wedwa kubahambi abafika bevela eIndiya, uyasebenza nakwamanye amazwe amaninzi asebenzisa iCovishield, kubandakanya uninzi lwaseAfrika.
Iindwendwe ezigonywe ngokupheleleyo ezivela eIndiya kusafuneka ziye kwi-10-yeentsuku ze-COVID-19 zokuvalelwa.
Iyeza lokugonya iCovishield laveliswa ngokudibeneyo yiYunivesithi yaseOxford kunye neAstraZeneca kwaye lenziwa liziko laseSerum laseIndiya.
AmaBritani agonywe e-UK ngala majethi ayenziwe eIndiya akufuneki ukuba ahlukane.
I-United Kingdom ibhengeze ukuba izakuphumla i-COVID-19 curbs zothambiso lokuthintela ngokupheleleyo abatyeleli bamanye amazwe ukuqala kwinyanga ezayo.
Kodwa uluhlu lwamazwe anezitofu ezivunyiweyo alubandakanyi i-India, nangona ilizwe lisebenzisa uhlobo lwasekhaya lokugonya i-AstraZeneca olwenziwe e-UK, kwaye ibangela ukungazinzi kwezopolitiko kunye nosongelo lokuziphindezela kumagosa ase-India.
Iyeza lokugonya iCovishield, liphuhliswe ngokudibeneyo yiYunivesithi yaseOxford kunye I-AstraZeneca Kwaye yenziwe yiPune esekwe ePune yaseSerum Institute yaseIndiya, ayaziwa yi-United Kingdom phantsi komthetho omtsha nangona ingokobuchwephesha ngokufanayo kwiidosi ezinikwe izigidi zamaBritane.
The I-AstraZeneca isitofu sokugonya senza uninzi lweedosi ezinikwe amaIndiya ukuza kuthi ga ngoku. Inani elincinci lithathe isitofu semveli esenziwe yiBharat Biotech, engasetyenziswayo e-UK.
Umphathiswa Wezangaphandle wase-India ubongoze abasemagunyeni kurhulumente wase-Bhritane ukuba "basombulule kwangoko umba wokuvalelwa bodwa" nabantu base Indiya betyelele Umanyano Kingdom kusafuneka ukuba babekelwe bodwa kwanokuba bagonyiwe ngokupheleleyo.
Imithetho emitsha yokungena, eziqale ukusebenza ngo-Okthobha, ziye zacaphukisa amaIndiya amaninzi, athi esi sigqibo sicalucalulo. AmaBritani agonywe e-UK ngala majethi ayenziwe eIndiya akufuneki ukuba ahlukane.
"Ndicebise ukusonjululwa kwangoko malunga nomcimbi wokuvalelwa kwabantu bodwa," utshilo uMphathiswa Wezangaphandle u-Subrahmanyam Jaishankar kwi-tweet namhlanje emva kwentlanganiso nomlingane wakhe wase-Bhritane u-Liz Truss eNew York, apho bobabini bezimase i-United Nations General Assembly.
Ukuhamba kwe-Bhritane kungakhokelela kwimpindezelo evela kwi-New Delhi, ngegosa likarhulumente wase-India lisithi kungenzeka lithathe amanyathelo okuphindisela ukuba umba awusombululeki ngokukhawuleza.
"Umba osisiseko ngowokuba, nali iyeza lokugonya - iCovishield - eyimveliso enelayisensi yenkampani yase-UK eyenziwe e-India nalapho sibonise ngeedosi ezizigidi ezintlanu e-UK ngesicelo sikarhulumente," Unobhala Wezangaphandle wase-India u-Harsh Vardhan Shringla uxelele oonondaba eNew Delhi.
Ukubiza ukungamkelwa kweCovishield "umgaqo-nkqubo ocalulayo", uthe uthethathethwano luyaqhubeka ne-UK malunga neemfuno ezintsha.
"Kodwa ukuba asilufumani ulwaneliseko siya kuba selungelweni lethu lokunyanzelisa amanyathelo okuziphendulela."
IKhomishini ePhakamileyo yase-Bhritane eNew Delhi ithe i-UK ibisebenza ne-India ukusombulula le ngxaki.